Guddiga Doorashada Kenya Oo Sheegay In La Qabanayo Doorashada | Somaliland Today
← Dawladda Maraykanka Oo Diyaarado Dagaal Dulmarisay Kuuriyada Waqooyi
Dagaal Afka Ah Oo Ka Dhex Qarxay Xaasaska Madaxweyne Donald Trump →
Guddiga Doorashada Kenya Oo Sheegay In La Qabanayo Doorashada
(SLT-Nairobi)-Guddiga Doorashada ee dalka Kenya ayaa waxay shaaca ka qaadeen in doorashada loo balansan yahay in ay dalka ka dhacdo 26 bishan ay sii socon doonto,iyada oo ay jirto in Raila Odinga uu tartanka isaga baxay.
Ku dhawaaqida arrintan ayaa waxaa ay soo afjaraysaa 24 saac oo jahwareer uu ka dhashay ka laabashadii uu hogaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga uu ka laabtay ka qayb galka tartanka doorashada ku celiska ah.
Waxa ay sheegeen guddiga in ay jiraan foomam ay tahay in uu saxiixo si sharciyan loo aqbalo in uu tartanka ka haray.
Go’aanka Odinga ayaa waxa uu keeni lahaa in madaxwayne Kenyatta oo kali ah uu tartanka ka qayb galo balse hadda arrintasi way is badashay.
Guddiga waxay sheegeen in 6 musharax ee kale ee doorashadii hore ka qayb galay ay imika doorashada ku celiska ah ka qaybgali karaan.
Hogaamiyayaasha mucaaradka Kenya ayaa waxay horey ugu baaqeen in isbadal lagu sameeyo guddiga doorashada ee hadda jira.